အံဆုံးသွား ( Wisdom Teeth ) ဆိုတာဘာလဲ? - Latha Dental Clinic
အံဆုံးသွား( Wisdom Teeth ) ဆိုတာက အပေါ်သွား အောက်သွားရှိတဲ့အနက် သွားတွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာ ပေါက်တဲ့ ၃ ချောင်းသော အံသွားကို အံဆုံးသွားလို့ ခေါ်ကြပြီး အထက်၊ အောက်၊ ဘယ်၊ ညာပေါင်း အံဆုံးသွား ၄ ချောင်းရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အသက် ၁၇ နှစ် နဲ့ ၂၅ နှစ်အတွင်းဆို အံသွားတွေပေါက်ကြပါတယ်။
Wisdom Teeth ဆိုတာ?
Wisdom Teeth ဆိုတာကတော့ ရင့်ကျက်လာတဲ့ အသက်အရွယ်မှာ ပေါက်တဲ့ အံသွားတွေအနက် ၃ချောင်းမြောက် (သို့) နောက်ဆုံးပေါက်တဲ့ အံသွားကို ခေါ်ပါတယ်။ ခေတ်အလိုက် ပြောင်းလဲလာသော အစားအစားတွေဟာ ကြိတ်ဝါးစရာ သိပ်မလိုတော့အောင် နူးညံ့လာတဲ့အတွက် မေးရိုးလှုပ်ဆောင်မှု လျော့နည်းလာရပြီး သေးငယ်လာရာမှတဆင့် အံဆုံးအတွက်နေရာ နည်းလာရာမှ အံဆုံးသွားဟာ အပြင်ဘက်ကို ထွက်ပေါ်မလာပဲ မေးရိုးထဲမှာတင် ငုပ်လျှိုးကွယ်ပျောက် နေရပါတော့တယ်။
ဒီလိုဆို Wisdom Teeth ဟာ မေးရိုးမှာ ပုံသဏ္ဍန်မမှန်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် သွားသန့်ရှင်းရေး လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ အခက်အခဲရှိလာပြီး အံသွားတွေမှာ ညှပ်နေတဲ့ အစာတွေကို ကောင်းမွန်စွာ မသန့်စင်နိုင်ခြင်းကြောင့် သွားတွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုးစားလာပြီး အံသွားအကုန် ပျက်ဆီးနိုင်ခြေ ရှိတာကြောင့်Wisdom Teethကို နှုတ်ဖို့ လိုအပ်တာပါ။ အံဆုံးသွား မနှုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ သွားဖုံးတွေယောင်လာမယ်၊ အံသွားတွန်းအားကြောင့် ရှေ့သွားတွေ ထပ်လာမယ်၊ ပြီးရင်တော့ တစ်ခြား သွားတွေ ပျက်ဆီးနိုင်ခြေပိုမြင့်လာပါမယ်။
Wisdom Teethနှုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ မေးရိုးကို အနည်းငယ်ခွဲပြီး မြှပ်နေတဲ့သွားကို ဆွဲထုတ်ပြစ်ရမှာမို့ အလွန်သေချာတိကျပြီး ပိုးမဝင်အောင် သေချာ ဂရုစိုက်နှုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ Latha Dental Clinic ကတော့ သွားနှုတ်တဲ့အခါ နာကျင်မှုမရှိအောင် ထုံဆေးပေးပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် နှုတ်ပေးနေတာကြောင့် ကုသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်စရာ လုံးဝမရှိစေရပါဘူး။ ပြီးရင်တော့ ခွဲထားသည့် သွားဖုံးကို ပိုးမဝင်စေရန်နှင့် တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်မှု မရှိစေရန် ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်ပေးနေတာမို့ သွားနှင့်ခံတွင်း ကုသမှုများအတွက် Latha Dental Clinic ရှိနေပါပြီ။
ဆေးခန်းလိပ်စာကတော့ အမှတ် ၆၆၁၊ ပထမထပ်၊ လသာနှင့်မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါများကိုကုသနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်း ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်း 01-371414, 095101483 သို့ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Tags: Latha Dental Clinic Wisdom Teeth